MR MRT: သူတော်ကောင်း
"သူတော်ကောင်း သားတို့သမီးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ တရားစခန်း သုံးရက် ပြည့်ပါပြီ။ သူတော်ကောင်းဆို့တော့ . . . တကယ့်သူတော်ကောင်းလား၊ သူတော်ကောင်း အစစ်လား။ နာမည်ခံ သူတော်ကောင်းလား။ အစစ်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အားလုံး လိုက်ဆိုကြမယ်။"
"သားတို့မှာ သမီးတို့မှာ သဒ္ဓါတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သဒ္ဓါဆိုတာ ယုံကြည်တာပါ။ ဘုန်းဘုန်းကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ဆရာဆရာမကို ယုံကြည်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ယုံကြည်ပါတယ်။"
"သားတို့မှာ သမီးတို့မှာ ဝီရိယတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဝီရိယက တွန်းပေးပါတယ်။ ထောက်ပေးပါတယ်။ ထောင်ပေးပါတယ်။ မတ်ပေးပါတယ်။ တက်တက်ကြွကြွ ကျက်သရေရှိရှိ လန်းလန်းဆန်းဆန်း နေနိုင်ပါတယ်။"
"သားတို့မှာ သမီးတို့မှာ သတိတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သတိရှိလို့ သိပါတယ်။ အခြေအနေကို သိပါတယ်။ ဘယ်ရောက်နေတယ် သိပါတယ်။ ဘာလုပ်နေတယ် သိပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် သိပါတယ်။"
"သားတို့မှာ သမီးတို့မှာ သမာဓိတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သမာဓိရှိလို့ စူးစိုက်ပါတယ်။ တည်ကြည်ပါတယ်။ စာကျက်တဲ့ခါ စူးစိုက်ပါတယ်။ သင်္ချာတွက်တော့ စူးစိုက်ပါတယ်။ စာသင်ခန်းထဲမှာ စူးစူးစိုက်စိုက် တည်ကြည်ပါတယ်။"
"သားတို့မှာ သမီးတို့မှာ ပညာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပညာရှိလို့ ခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ အမှန်အမှား ခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ သင့်တော်မတော် ခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ ပြောသင့် မပြောသင့်၊ လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ခွဲခြားတတ်ပါတယ်။"
"ပစ္စည်းရှိမှ လူချမ်းသာ။ ဥစ္စာရှိမှ လူချမ်းသာ။ သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ။ ငါးမျိုးဆိုတာ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ ပစ္စည်းပါ။ သဒ္ဓါတွေ ရှိမှ၊ ဝီရိယတွေ ရှိမှ၊ သတိတွေ ရှိမှ၊ သမာဓိတွေ ရှိမှ၊ ပညာတွေ ရှိမှ သူတော်ကောင်း အစစ်ပါ။"
"သူတော်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေ စုဆောင်းပိုင်ဆိုင်ပြီး သူတော်ကောင်း အစစ်လေးတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။"
Posted by Ashin Acara. at 10:45 PM
Labels: 01C. Articles - ဆောင်းပါးများ, 04. Others - အခြား, 04. Reader - ဖတ်စာ, 04a. Talk - ဟောတရား, 09. Child - ကလေး